February 2013 ~ နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မကွေး)
Android Phone အားလုံးအတွက် Recovery Mode ၀င်နည်း
10:46 AM Android 1 comment
ကဲ ဘော်ဒါတို့ Android Phone အားလုံးအတွက် Recovery Mode ၀င်ရခက်နေသူများ ခုကျွန်တော်တင်ပေးမယ့် Software လေးက အလွယ်တကူ ဖြေရှင်းပေးပါလိမ့်မယ်
Click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ Recovery ရောက်သွားမှာပါ ကဲ သုံးကြည့်လိုက်ကြပါဗျာ
ကျွန်တော်တို့တွေ ဖုန်းကို Recovery mode ဝင်ရင် ကီးတွေ တွဲနှိပ်ပြီး ဝင်ကြရတယ်မဟုတ်လား..
ကီးတွေအနှိပ်မှားရင် Recovery mode ကို မရောက်ဘူးလေ.. ဒါကြောင့် ဒီကောင်လေးကီးတွေနှိပ်စရာမလိုတော့ဘူး . . . ကျွန်တော်စမ်းကြည့်တာတော့ Huawei,Samsaung မှာတော့ အဆင်ပြေတယ်....အခြားဟာတွေတော့ support ပေးလားတော့မသိဘူး။ သုံးကြည့်လိုက်နော်
ဖုန်းမှာ USB Debugging ကို on ထားပြီး USB ကြိုးနဲ့ Computer မှာ ချိတ်လိုက်.. Driver သိပါစေ..
ပြီးရင် ဒေါင်းလို့ရလာတဲ့ exe ဖိုင်ကို Install လုပ်လိုက်ပါ. ပြီးရင် Run လိုက်ပါ.. ပေါ်လာတဲ့ဘောက်လေးထဲမှာ Click To Enter Recovery ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ.. ဖုန်းက Restart ကျသွားပြီး Recovery Mode ကိုရောက်နေပါလိမ့်မယ်... နာမည်က Android One Click Recovery တဲ့ဗျား..
အောက်မှာဒေါင်းနော် . . .
အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ . . .
USB Virus ရှင်းနည်း စာအုပ်လေးပါ
10:37 AM နည်းပညာ No comments
Usb Virus ရှင်းနည်းစာအုပ်လေးပါ
ကဲဘော်ဒါတို့ရေ လိုချင်ရင်တော့ အောက်မှာဒေါင်းသွားပါ ဖိုင်ဆိုဒ်အသေးလေးပါ . . . .
10:43 AM နည်းပညာ No comments
ကဲ ဘော်ဒါတို့ရေ Android နဲ့ ပတ်သက်တာတွေကို စုံလင်စွာ သေချာရှင်းပြထားတဲ့ စာအုပ်ကောင်းလေးပါ လိုချင်ရင်တော့ အောက်မှာဒေါင်းသွားပါခင်ဗျာ . . .
အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေဗျာ . . .
Ref: ညီနေမင်း (နည်းပညာ)
Android Phone ကနေ ဘောလုံးပွဲကြည့်မယ်
8:54 PM နည်းပညာ No comments
ကဲ ဘောကိုချစ်တယ် ဘောကိုမြတ်နိုးတယ်ဆိုတဲ့ ဘော်ဒါတို့ကို ဖုန်းကနေပြီးတော ဘောလုံးပွဲတိုက်ရိုက်ကြည့်လို့ရမဲ့ apk ဖိုင်လေးကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ် ကဲအောက်ကလင့်မှာသာ ဒေါင်းလိုက်ဗျာ
တစ်ခုတော့ ရှိတယ်နော် ကိုယ့်ဖုန်းမှာ အင်တာနက်တော့ ရှိရမယ် ကဲဒေါင်းလိုက်ဗျာ
ဒီနှစ်ခုကိုဒေါင်းပြီး မိမိဖုန်းမှာ အင်စတော့လုပ် ပြီးရင် အင်တာနက်ဖွင့် syblaTV ဆိုတဲ့ဟာကိုဖွင့်
ဒါဆိုရင်တော့ ကြည့်လို့ရပြီပေါ့ဗျာ . . .
ံHuawei Phone အတွက်ဆိုရင်တော့ အပေါ်ကဟာက အဆင်ပြေပါတယ်ဗျာ
Samsaung ဖုန်းတွေအတွက်ကတော့ အောက်မှာထပ်ဒေါင်းပါခင်ဗျာ
သူကတော့ code2ခု ထပ်တင်ရတယ်ဗျ . . . ဒါမှ ကြည့်လို့ရမှာပါ . . .
အင်း နောက်ထပ် TV တွေလည်း ရှိသေးတယ်ဗျ လိုင်းတွေအများကြီးပဲဗျ ထပ်ပြီးထည့်ချင်လည်းရတယ်
အဲဒီကောင်မှာက Smart Down တွေလည်းပါတယ် လန်းတော့တော်တော်လေးလန်းတယ် ဖုန်းကနေ လက်ဝှေ့ကြည့်လို့ရတာပေါ့ ဟဲဟဲ... အဲဒါကတော့ နောက်မှပေါ့နော် မျှော် . .. .
Touch အဆင်မပြေတဲ့Android ဖုန်းတွေအတွက်
8:34 PM နည်းပညာ No comments
ကဲဘော်ဒါတို့ ကြုံဖူးကြလားတော့မသိဘူး Touch Screen ဖုန်းတွေမှာ Back key (or) Home key နှိပ်လို့မရလို့ စိတ်ညစ်နေလား မပူပါနဲ့ ဒီဟာလေးကို ဆောင်ထား သူမှာအကုန်ပါတယ် သုံးနည်းကတော့ သေချာမရှင်းပြတော့ဘူးနော် ဥပမာ--ဘော်ဒါဖုန်းမှာ Back key မရဘူးဆိုရင် ကျွန်တော်ခုတင်ပေးမယ့် apk file လေးကို ဘော်ဒါဖုန်းမှာ အင်စတောလုပ် ပြီးရင်ဖွင့်လိုက်ပါ... အဲဒီထဲမှာ ခေါင်းစဉ်အလိုက်ပေးထားတယ် Home,Back, etc; Back key အတွက်ဆိုရင် Back ဆိုတဲ့ဟာလေး ကို အမှန်ခြစ်ပေးလိုက်ပါ။ လုပ်ရမှာကတော့ အောက်မှာ ပုံလေးပါပါတယ် အောက်ကို လက်သုံးချောင်းဆွဲလိုက်ရင် Back ပေါ့ . . .ဟဲဟဲ သုံးကြည့်လိုက်ပါ နည်းနည်းလောက်ကလိလိုက်ပေါ့ အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေဗျာ . . .
8:18 PM နည်းပညာ No comments
Posted by @@@nyanthu.blogspot.com@@@
ကဲဘော်ဒါတို့ရေ လိုချင်ရင်တော့ အောက်မှာဒေါင်းသွားပါခင်ဗျာ . . .
Android ဖုန်းအတွက် Start Menu for Android v1.1.7
9:54 PM နည်းပညာ No comments
Window XP,Window7တို့မှာပါတဲ့ Window အလံလေးနဲ့ Start Menu ကိုကွန်ပျူတာသုံးတဲ့သူတိုင်းသိကြမှာပါ။ Android မှာလည်း Application List ကို Window မှာပါတဲ့ Start Menu ပုံစံအတိုင်းထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်အောင် ဒီ Start Menu for Android လေးကလုပ်ဆောင်ပေးမှာပါ။ Start Menu ထဲတွင် မိမိအသုံးအများဆုံး application ကိုလည်း list တစ်ခုအနေနဲ့စုစည်းပေးထားနိုင်မှာဖြစ်သလို ဒီဇိုင်းအနေနဲ့လည်း Window7ဒီဇိုင်း၊ Mac OS X ဒီဇိုင်းစသည်ဖြင့် Theme ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Start Menu for Android ကို Google Play မှာ ၂.၂၉ ဒေါ်လာနဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီး မြန်မာ Mobile Application Store မှာတော့ freedownload ရယူနိုင်ပါတယ်။
Start Menu for Android v1.1.7 ကိုအောက်က ကြိုက်နှစ်သက်ရာ link မှ download ရယူနိုင်ပါတယ်။
အောက်မှာ ဒေါင်းရန် -------
ကဲအားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေ. . . .
ခုတင်ပေးမှာကတော့ ကျွန်တော်ဘလော့ကို offline ကနေ ဖတ်ချင်သူများအတွက်ပါ
12:41 PM Android app and Games No comments
ကျွန်တော်ဘလော့ကို offline ကနေ ဖတ်ချင်သူများအတွက်ပါ
အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ . . .
12:34 PM Android 11 comments
Android Vesion များအကြောင်း
2:51 PM နည်းပညာ No comments
Andriod ကို စတင်ဖြန့်ချိတဲ့ Version 1.0 မှာ Andriod လို့ပဲခေါ်ပြီး 2008 ခုနှစ်လောက်မှာ စတင်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။
2009 မှာတော့ Version 1.5 ကိုဖြန့်ချိပြီး Code name ကို Cup Cake လို့ ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကစပြီး Andriod ရဲ့ Version အသစ်တိုးတိုင်း Code name တွေကို စားစရာ အချိုပွဲလေးတွေရဲ့ နာမည်လေးတွေနဲ့ ပေးလာခဲ့ပါတယ်။
Version 1.6 ဖြစ်ပါတယ်။ Code name က Donut ပါ။ အဲဒီလောက်တုန်းကထိ Google Phone ဆိုပြီး စသုံးတာ HTC လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်။
Version2.0 နဲ့ Version2.1 နှစ်ခုလုံးကို Eclair ဆိုတဲ့ Code name ပဲပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ကစပြီး Huawei လို တရုတ် Company တွေက ဈေးသက်သာတဲ့ Andriod သုံးဖုန်းတွေကို ထုတ်ရောင်းလာလို့ Andriod ကို မြန်မာတွေစတင်ရင်းနှီးလာကြပါပြီ။
Version2.2 ဖြစ်ပါတယ်။ USB Thetering နဲ့ Wifi hostpot feature တွေပါဝင်လာလို့ Andriod ကိုအောင်မြင်အောင် ထမ်းတင်ပေးခဲ့တဲ့ Version တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Version 2.3 ဖြစ်ပြီး လက်ရှိအသုံးအများဆုံး Version ပါဘဲ။ Version2.0 Eclair ကစပြီး Andriod ဖုန်းကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်သုံးလာကြတဲ့လူများစုက Version 2.3 ကိုမြှင့် Upgrade လုပ်နိုင်တာကြောင့် Eclair နဲ့ Froyo သုံးသူတွေအားလုံးလိုလို Gingerbread ဖြစ်သွားကြပါတယ်။(2.3 to 2.3.7)
Version3 - Code name- Honeycomb ကို 2011 အကုန်လောက်မှာ ဖြန့်ချိခဲ့ပေမယ့် အဲဒီ Version က Tablet တွေအတွက် သီးသန့် Version ဖြစ်တာကြောင့် Mobile Phone တွေမှာ အသုံးပြုလို့မရခဲ့ပါဘူး။ (3.1 to 3.2)
ပါမုန့်ရေခဲညှပ်လို့ မြန်မာတွေခေါ်ကြပြီး တော်တော်လေး သဘောကျနေကြတဲ့ Version4ပါ။ Facelock နဲ့ Andriod bean လို Function တွေပါဝင်လာပါတယ်။ Hardware လိုအပ်ချက်ကြီးမားတာကြောင့် Model မြင့်ဖုန်းတွေမှာတော့ Upgrade ပြုလုပ်လို့ကောင်းပေမယ့် Hardware နိမ့်တဲ့ ဖုန်းတွေနဲ့ Screen Size သေးတဲ့ ဖုန်းတွေမှာတော့ အဆင်မပြေတော့ပါဘူး။ နောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ ဖုန်းတွေမှာ ICS ကိုပဲသုံးထားလို့ ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့အရည်အသွေးကို ICS တင်ထားလား မတင်ထားလား ကြည့်ရုံနဲ့သိသာပါတယ်။ (4.0.3 to 4.0.4)
Version 4.1 ကတော့ နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ Andriod Version ပါဘဲ။ Stable မဖြစ်သေးတာကြောင့် Original ၀ယ်ယူထားတဲ့ ဖုန်းတွေမှာတောင် အခုထိ ပါဝင်ဦးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်တိုင် Upgrade ပြုလုပ်မှ သုံးစွဲလို့ရနိုင်မှာပါ။
Andriod တွေရဲ့ Version တွေကို ကြည့်တဲ့အခါ စိတ်ဝင်းစားစရာလေးတွေကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒါကတော့ Version တွေရဲ့ Code name တွေပါဘဲ။ ခုနကပြောသလို အချိုပွဲနာမည်လေးတွေဖြစ်နေယုံတင်မဟုတ်ဘဲ Alphabetically ဖြစ်နေတာကိုလည်းတွေ့ရမှာပါ။ Cup Cake ကစပြီး Jelly Bean အထိ C, D, E, F, G, H, I, J ဆိုပြီး အစဉ်လိုက်ပေးထားတာပါပဲ။ ဒါကြောင့် သေချာပါတယ် နောက်ထပ်ထွက်မယ့် Andriod ရဲ့ Code name က K နဲ့စမှာပါဘဲ။
Credit to မင်းသန့်အောင် (Andriod Root Guide book)
ဘာဖုန်းနေနေ တစ်ချက်တည်းနဲ့ Root
2:46 PM နည်းပညာ 1 comment
Posted By nyanthu.blogspot.com
SRS ROOT ပါ။ Android version 1.5,2.1,2.2,2.3,4.0,4.1,4.2 တွေကို တချက်တည်းနဲ. ROOT လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Samsung S2,S3,NOTE,NOTE တို.ကိုပါ ROOT လုပ်လို.ရပါတယ်။
ကျနော်တော.မစမ်းရသေးပါဘူး။ အဆင်ပြေရင် Comment လေးပေးပါဦး
9:48 PM သတင်းရေးရာအဖြာဖြာ No comments
နိုင်ငံတော်ပိုင် ဘဏ္ဍာငွေများကို အလွဲသုံးစားလုပ်မှု၊ ပြည်တွင်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍအ တွက် ၎င်းတို့သုံးစွဲသည့် စက်ပစ္စည်းများ၏ေõဈးနှုန်းပမာဏများကို မူရင်းနှုန်းထားများထက် အဆများစွာ ပိုမိုတင်ပြတောင်းခံမှုအပါအ၀င် အခြားသော သံသယရှိဖွယ်ပြဿနာများအတွက် ယခုကဲ့သို့ ပုဒ်မ ၄၀၉ မှ အပက-၃ သို့ ပြောင်းလဲတရားစွဲဆိုရန် စီစဉ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယခုလက်ရှိတွင် ပုဒ်မ ၄၀၉ ဖြင့် စစ်ဆေးခံနေရသည့် အဆိုပါ ပုဂ္ဂိုလ်ရှစ်ဦးသည် အပက-၃ သို့ ပြောင်းလဲတရား စွဲဆိုခံရပြီး ပြစ်မှုထင်ရှားသည်ဆိုပါက အနည်း ဆုံးထောင်ဒဏ်ဆယ်နှစ်မှ အများဆုံး တစ်သက်တစ်ကျွန်းအထိ ကျခံရနိုင်ကြောင်း နေပြည်တော်၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ မှုခင်းဌာန၏ ဒုတိယရဲမှူးကြီးဝင်းစိန်ကပြောသည်။
“အခုအချိန်မှာ ပြောနိုင်တာက ပုဒ်မ ၄၀၉ ကနေ အပက-၃ ကိုတက်ဖို့ကတော့ သေချာနေပါ တယ်။ ပြစ်မှုမြောက်ရင်တော့ ဥပဒေအတိုင်း အရေးယူသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာကတော့ ဒီထက်အများကြီး မသိရသေးဘူးဖြစ်နေတယ်။ စစ်ဆေးဆဲကာလက မတက်သေးဘူးပေါ့” ဟုအထက်ပါတာဝန်ရှိသူက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
အပက-၃ ဖြင့် တရားစွဲဆိုခြင်းကို နှစ်လအတွင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု သိရသည်။
အရာရှိရှစ်ဦးတွင် ယခင်က မိုဘိုင်းအင်ဂျင်နီယာချုပ်အဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့ဖူးသည့် လက်ရှိမြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး၏ အထွေ ထွေမန်နေဂျာ အပါအ၀င် အင် ဂျင်နီယာချုပ် အဆင့်ရှိသူများနှင့်အတူ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အနီးစပ်ဆုံး လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ် သော ရတနာပုံတယ်လီပို့ ကုမ္ပဏီလီမိတက်နှင့် အကျိုးတူ
ပူးပေါင်းထားသော အခြားပုဂ္ဂလိက လက်ခြေခံကုမ္ပဏီ အချို့မှ တာဝန်ရှိသူအချို့လည်း စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုများတွင် ပါဝင်နေသည်ဟု ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
Ref & Credit to7Days News Journal
ဖုန်းဆင်းကတ်များကို အများပြည်သူအလွယ်တကူ ဝယ်ယူနိုင်မည့် ဈေးနှုန်းဖြင့် ဧပြီ ၁ ရက်တွင် စရောင်းမည်
9:29 PM သတင်းရေးရာအဖြာဖြာ No comments
ဖုန်းဆင်းကတ်များကို အများပြည်သူ အလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင် မည့် ဈေးနှုန်းဖြင့် ဧပြီ ၁ ရက်နေ့တွင် စတင် ရောင်းချပေး မည်ဟု ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်းက ပြောသည်။
ယင်းသို့ ဆင်းကတ်ရောင်းမည့် အချိန်ကိုအတိအကျ ပြောဆိုသော် လည်း ပြည်သူများသိချင်နေကြသော ဆင်းကတ် ဈေးနှုန်းအတိ အကျကိုမူ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးက ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်း မရှိပေ။
”ဈေးနှုန်းကိုတော့ ကျွန်တော် သိနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီထက် လည်း လျော့သွားနိုင်သလို နည်းနည်းလည်း အပြောင်းအလဲ ရှိသွားနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် အခုနေအခါမှာ ဈေးနှုန်းပြောလလိုက်လို့ အပြောင်းအလဲရှိသွားခဲ့ရင် ဘယ်ကောင်း မလဲ”ဟု ပြည်ထောင်စု
ပြည်သူတို့ အလွယ်တကူ ဝယ်ယူနိုင် မည့်ဈေးနှုန်းတစ်ခု ဖြစ်လိမ့် မည့်အကြောင်း ဦးစိုးသိန်းက ကတိပြုပြောသည်။ အစိုးရက ကျပ်နှစ်သိန်းတန်ဖုန်းများ ရောင်းချနေစဉ်တွင် ရွှေပြည်တံခွန် ကုမ္ပဏီက ကျပ် ၅ဝဝဝ တန်ဖုန်းများ ရောင်းချပေးမည်ဟု ပြောဆိုခဲ့ဖူးပြီး ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၌ အော်ပရေတာ အဖြစ်ရွေးချယ်ခံရပါက …
ဖုန်းဆင်းကတ်နှင့် အင်တာ နက်လိုင်းများကို အခမဲ့ ပေးသွား မည်ဟု Red Link ကုမ္ပဏီကလည်း ဖေဖော်ဝါရီ ပထမပတ်အတွင်းက ကြေညာခဲ့သည်။
”မူကိုက တကယ်ကျသွား အောင်ကို လုပ်ရမယ်လေ။ အခု ဟာက ဆက်သွယ်ရေးက အမှုကို တာဝန်ရှိသူတွေ စစ်ဆေးနေတော့ ဖုန်းရောင်းချမယ့် ကိစ္စကို လတ် တလော မလုပ်နိုင်သေးတာ” ဟု ဦးစိုးသိန်းက ဆက်ပြောသည်။
ဆက်သွယ်ရေးသတင်းအချက် အလက်နှင့် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးသောင်းတင်က အများဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ် မည့် ဈေးနှုန်းတစ်ခုဖြင့် ဖုန်းများ ရောင်း ချပေးမည့်အကြောင်း ဇန်နဝါရီလ အတွင်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
7:04 PM နည်းပညာ No comments
6:57 PM နည်းပညာ 1 comment
မြန်မာလို PDF စာအုပ်များ ၁၀၃ အုပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်... လိုချင်တဲ့စာအုပ်ကို တစ်ချက်ရှာကြည့်လိုက်ပါ...pyayblogger မှာတွေ့လို့ ပြန် Share လိုက်တာပါ။
ကွန်ပျူတာမှာ 7.45 GB Free ရအောင်အသုံးပြုနည်း (214KB)(Download jumbofiles) အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေ . . . Blog တစ်ခုမှာတွေ့လို့ ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ . . .
zombieroadtrip_1.0 For Android (သရဲတွေလက်ကပြေးရသောဂိမ်း)
ပြန်လည်မျှဝေသူ- - - - -- ဥာဏ်သူလင်း
ကားနဲ့ Zombie တွေလက်ကပြေးရတဲ့ Game လေးပါ…..
Gold တွေရလာရင် ကားတွေထက်ဝယ် လက်နက်တွေထပ်ဝယ်ပြီးဆော့ရတာပါ…..
File Size အနေနဲ့ကတော့ 23.33Mb ရှိပါတယ်…
Android Os 2.3 နဲ့အထက်ရှိရင်ဆော့နိုင်မှာပါ….
Mobile Driver များစုစည်းမှု
ကဲ ဒီတစ်ခါတော့ဗျာ….ဖုန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာပဲ ကလိချင်ရင်ဖြစ်ဖြစ်..အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ လိုတာ Driver ပါ။ အဲဒီတော့ ဒီမှာ ကျွန်တော်မှာ ရှိသမျှ Driver လေးတွေကို စုစည်းတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ No.1_အနေနဲ့ လူသုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့ Huawei ဖုန်းတွေအတွက် ဒီမှာ ယူပါ။ >> http://mc.tt/aaxzzQTFkC >> https://www.box.com/s/anecbccugwofnkioyfi3 >> http://www.mediafire.com/download.php?v30n3mmhe47dw3i အဲဒီကောင်လေးက Huawei တိုင်းနဲ့ အဆင်ပြေပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် လက်ရှိသုံးနေတဲ့ကောင်လေးပါ။ >> http://mc.tt/44yAAVyz0S >> https://www.box.com/s/taaj6ijubs7rb19fv22y >> http://www.mediafire.com/download.php?f6hnjqgxqc8c2xx … Read More
ပြန်လည်မျှဝေသူ - - - - ဥာဏ်သူလင်း
သူငယ်ချင်းများ အားနေရင် ကွန်ပျူတာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ နည်းပညာလေးတွေရစေဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ် . . . ကဲအောက်ကလင့်မှာ
ရှာပြီး ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ စာအုပ်ကို ဒေါင်းပေတော့ အားလုံးပဲ နည်းပညာတွေ တိုးတက်ကြပါစေခင်ဗျာ . . .
ရေးသားသူ ----- ဥာဏ်သူလင်း
Samsaung Phone တွေမှာ မြန်မာစာဖောင့် ထည့်ထားသော်လည်း တစ်ခြားဖုန်း ကို Message ပို့ရင် ???? တွေပေါ်နေတတ်ပါတယ် . . .
အဲဒါကို ပြောင်းနည်းလေး ပြောပြချင်တယ် . . .
ပြောင်းနည်းကတော့ Message ကိုနှိပ်လိုက်ပါ .. . နောက်ပြီး Menu ကနေ Setting ထဲကိုဝင် ပြီးတာနဲ့ Input Mode ကိုတွေ့အောင်ရှာ
တွေ့ပြီဆိုရင် နှိပ်လိုက်ပါ . . . အဲဒီမှာ စာကြောင့်း (၃)ကြောင်းပေးထားပါတယ် . . . အဲဒီထဲကမှ Automatic ...........ဆိုတဲ့စာကြောင်းကို ရွေးပေးလိုက်ပါ
နောက်ပြသနာတစ်ခုက Message Center မှားယွင်းခြင်း
အဲဒါက ဘာဖြစ်သလိုဆိုတော့ ကိုယ့်ဆီကို message ပို့ရင် ၀င်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် သူများကို ကိုယ်ကပို့ချင်တယ်ဆိုရင် Failed ပြနေပါတယ်
အဲဒါကတော့ Phone တိုင်းလိုလို Message Center မှားရင် Message ပို့လို့မရပါဘူးခင်ဗျာ
ပြောင်းနည်းကတော့ Samsaung Phone နဲ့ပဲပြောသွားပါမယ်
အပေါ်မှာလိုပဲ Message ကိုနှိပ်လိုက်ပါ .. . နောက်ပြီး Menu ကနေ Setting ထဲကိုဝင် အဲဒီထဲမှာ Message Center ကိုရှာပါ
တွေ့ပြီဆိုရင် Message Center code က +9595930003 ဖြစ်ရပါမယ် အဲလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင် ပြောင်းပေးရပါမယ် . . .
မှတ်ချက်။ samsaung phone အတွက်သာဖြစ်ပါတယ် . . .
တခြားဖုန်းများမှာ ကွဲပြားမှုရှိပါသောကြောင့် မတင်ပေးတော့ပါ
အဆင်မပြေတာရှိရင် nyanthu2012@gmail.com ကို မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ . . .
အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ .. .. .. .
Android & china phone…..Pattern lock & PIN Lock ဖြုတ်နည်း
3:24 PM နည်းပညာ No comments
အခုနောက်ပိုင်း android phone တွေမှာ Patten lock ကျတာလို့ PIN lock ကျတာလို့ အဖြစ်များလာကြပါတယ်….
အဲဒီလို ဖြစ်သွားရင် လူတိုင်းက ကိုယ့်ဖုန်းကို factory rest ချတတ် ကြပါတယ်..အဲဒီလို ချလိုက်ရင် အထဲက data တွေ
အကုန်ပျောက်တတ်ပါတယ်…ကျွန်တော် တစ်ချက်ချင်း ရှင်းပြပေးပါမယ်…..အဲဒီလို ဖြစ်လာရင် ကျွန်တော် တင်ပေးတာ
လေးနဲ့ လုပ်လိုက်ပါ အဆင်ပြေပါတယ်….အခုကျွန်တော် ပြောပြမှာကတော့ lock,PIN ဖြည့်တဲ့ နည်း (၂)နည်းပါ……..
ပထမနည်းကို….သိဖို့ အတွက် ဒါလေးတွေလိုပါတယ်…ကိုယ်ဖုန်းဟာ CWM Recovery လေးသွင်းထားဖို့ လိုပါတယ်..
Recovery ဖော်လို့ရရင် အဆင်ပြေပါတယ်………………………………………………………………………………….
MMSD မှာ ဒေါင်းပါ
ဒေါင်းလို့ ရလာတဲ့ zip ဖိုင်ကို format ရိုက်ထားတဲ့ sd card ထဲ ထည့်ပါ
ပြီးရင် ဖုန်းကို restart ချပါ..ဒါမှမဟုတ် ပါဝါပိတ်ပါ .(zip ဖိုင် ထည့်ထားတဲ့ sd card ကို ဖုန်းထဲ့ကို ထည့်ပါ)
recovery ခေါ် ပြီးရင် Install from sd card >>Choose zip from sd card>>delete pattern lock
ကိုရွေးပြီးတော့ install လုပ်လိုက်ပါ…..ပြီးရင်ဖုန်းထဲမှာ patten ဆိုရင် ကိုယ်ကြိုက်တာ ဆွဲလိုက်ပါ………..
pin lock ဆိုရင် တော့ ကိုယ့်ကြိုက်တာ ရိုက်လိုက်ပါ ပွင့်သွားပါပြီ…………
နောက်တစ်နည်းကတော့ လူတိုင်း သိပြီးသား ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်………သူ့နာမည်ကတော့ SHUAME
ဒီနည်းကို လုပ်ဖို့ ဒါလေးတွေကို လိုပါတယ် USB သိရန် လိုပါသည် ဖုန်းနဲ့ PC သိရင် အဆင်ပြေပါပြီ
ပုံတော့ မတင်ပေးတော့ဘူးနော်………အဲဒီထဲမှာ Z ပုံစံလေး ရှာပြီး Lock ဖြည့်လိုက်ယုံပါဘဲ
shuame ကတော်တော်ကောင်းပါတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ဒီကောင်က root,unroot,back up
restore ,recovery mode တွေ ပါပါတယ်…….သူကတော့ china phone တော်တော် များများ
မှတ်ချက်။ ။ Gmail account တောင်းနေပြီ ဆိုရင်တော့ ဒါတွေနဲ့ မရတော့ ပါဘူး format ချမှ အဆင်ပြေမှာပါ
တဆင့်ပြန်လည်မျှဝေခြင်း - ဥာဏ်သူလင်း
Galaxy Gio S-5660 Custom Rom ICS 4.0.4 တင်နည်း
Galaxy Gio S-5660 Custom ICS 4.0.4 တင်နည်း ကိုပြောပါမယ်
မိမိ ဖုန်း ကိုတော့ Root လုပ်ပြီးသာဖြစ်ရပါမယ် Root မလုပ်ရသေးသူများ အရင်ဆုံး Root လုပ်လိုက်ပါ ပြီးရင် လိုအပ်ဒါလေးကိုအောက်မှာဒေါင်းလိုက်ပါ
GioSIII V8 Custom Rom ကို ဒီမှာဒေါင်းပါ http://www.mediafire.com/?kl4oeinerm8ueqe
ဖုန်းထည်းက မိမိ လိုအပ်ဒါတွေကို backup လုပ်ထားစေချင်ပါတယ်
၁။ GioSIII V8.zip ကို sd card ထဲ ထည့်ပါ ပြီးရင် ဖုန်း ကို ပိတ်လိုက်ပါ
၂။ power + Home ကို နိပ်ထားပေးပါ ပထမ ဦးဆုံးစာတန်းလိုဂိုပ်ါလာတာနဲ့ releaseလုပ်ပေးပါ Recovery modeကိုရောက်ပါမယ်
၃။ install from sd cardကိုရွေးပေးပါ ပြီးရင် GioSIII V8.zip ကို ရွေးပေးပါ ပြီးရင် Yes It will be installed ကိုနှိပ်ပေးပါ
လိုအပ်ဒါတွေကို auto install လုပ်သွားပါမယ် ပြီးရင် go back ကို နိပ်ပြီးပြန်သွားပါ
၄။ data/factory reset လုပ်ပေးပါ ပြီးရင် r cache ကို wipe လုပ်ပေးပါ ပြီးရင် ဖုန်းကို Reboot လုပ်ပေးလိုက်ပါ
Reboot လုပ်နေဒါ အချိန်အနည်းငယ်ကြာပါမယ် မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဘက်ထရီးဖြုတ်လိုက်ဒါတို့မလုပ်ပါနဲ့ဖြစ်နိုင်ရင် ဘာမှ မနိပ်ဘဲ စောင့်ပေးပါ
၅။ ဖုန်းပြန်တက်လာရင် media scanning လုပ်နေပါမယ် completed ဖြစ်တဲ့ အထိစောင့်ပေးပါ
ICS 4.0.4 နဲ့ လန်းလို့ ရပါပြီ
1:58 PM Huawei Root No comments
လိုအပ်သော ဖိုင်ကို ဒေါင်းပါ >>>> U8825-1rootByHtayHlaingOo
Google Play ၀င်နည်းစာအုပ်လေးပါ
မြန်မာနိုင်ငံကနေ play store ၀င်မရသူများ အောက်ကလင့်မှာ ၀င်ပုံဝင်နည်း ဒေါင်းလုပ်ချနည်းတွေ
ရေးပေးထားတဲ့ စာအုပ်လေးပါ။ လိုအပ်တာတွေကို အောက်မှာဒေါင်းသွားပါခင်ဗျာ
Android ဖုန်းကနေ ဘောလုံးပွဲကြည့်မယ်
ကဲ ဘောကိုချစ်တယ် ဘောကိုမြတ်နိုးတဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ဘော်ဒါတို့ကို ဖုန်းကနေပြီးတော့ ဘောလုံးပွဲကြည့်လို့ရမဲ့ apk ဖိုင်လေးကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ် ကဲအောက်ကလင့်မှာသာ ဒေါင်းလိုက်ဗျာ
Huawei Phone တွေအတွက်ပဲ အဆင်ပြေမှာပါ
Samsaung ဖုန်းတွေအတွက်က နောက်မှ ထပ်တင်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ
Android ဖုန်းအတွက် apk ဖိုင်တွေကို Computer ပေါ်က အင်စတောလုပ်မယ်
3:54 PM နည်းပညာ No comments
ယခု တင်မှာကတော့ apk ဖိုင်တွေကို ကွန်ပျူတာကနေအင်စတော လုပ်မှာပါ ဒီကောင်လေးက မန်မိုရီ ကဒ်ထဲကို တစ်ခါထဲ အင်စတော လုပ်လို့ရပါတယ် သူမှာရွေးစရာပေးထားပါတယ် Internal or external . . .
နောက်တစ်ခုကောင်းတာက တစ်ခုချင်းစီမဟုတ်ဘဲနဲ့ ကိုယ်အင်စတောလုပ်မဲ့ ဂိမ်းတွေကို Select ပေးပြီး အများကြီးကို တစ်ခါထဲလုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ သုံးကြည့်ပါ ကောင်းကျိုးကတော့ အမိုက်စားပဲနော်
အောက်မှာ တင်ပေးထားပါတယ် . . .
သူ့ကို Extract လုပ်လိုက်ပါ သူ့ထဲမှာ ဖိုင်(၄)ခုပါပါတယ် အဲဒီထဲကမှ APK Installer ဆိုတဲ့ application ကိုဖွင့်ရမှာပါ
ဖွင့်ပြီးရင် Drag to apk installer ဆိုတဲ့ ဘောက်ပေါ်လာမယ် ဒါဆိုရင် အဆင်ပြေပြီ
ကိုယ်တင်ချင်တဲ့ apk ဖိုင်ကို ဆွဲထည့်လိုက်ရုံပဲ တစ်ခုတော့ရှိတယ် ဖုန်းကိုတော့ USB Debugging on ထားရပါမယ်
Huawei Y300-0000 တွေ Firmware တင်တဲ့အခါ Step2မှာ Failed ပြပြီး ဆက်မတက်တော့တဲ့ ပြဿနာ တက်နေရင် အောက်ကဖိုင်ကို ဒေါင်းပြီး ဖြည်လိုက်ပါ.. ...
Windows7တွေ Activate ပျက်သွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Activate မဖြစ်သေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်.. ဒီကောင်လေးကို သုံးလိုက်ပါ.. Windows7အမျိုးအစားတွေဖြစ်...
Huawei G610 (G610-C00) Official Firmware
ဒါလေးကလည်း MEC Tel ထုတ် CDMA 800 + GSM သုံးချင်သူတွေ အကြိုက်တွေ့နေတဲ့ G610 (CDMA+GSM) ရဲ့ Official Firmware လေး ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာ ...
MMAS Zawgyi Changer2v1.0.5 for android
Android ဖုန်းတွေကို မြန်မာစာ နဲ့ မြန်မာကီးဘုတ်ထည့်သွင်းချင်သူတွေအတွက် ဖုန်းထဲမှာတင်လွယ်လွယ်ကူကူ မြန်မာစာထည့်သွင်းနိုင်မယ့် Myanmar Mobil...